Politics Meets Policies: The Emergence of Programmatic Political Parties | International IDEA
“Programmatic” ကျသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း
Home / Publications / Reports / Politics Meets Policies: The Emergence of Programmatic Political Parties
Nic Cheeseman, Juan Pablo Luna, Herbert Kitschelt, Dan Paget, Fernando Rosenblat,t Kristen Sample, Sergio Toro, Jorge Valladares Molleda, Sam van der Staak, Yi-ting Wang
Myanmar School of Politics
English, العربية, español, မွနျမာဘာသာ
မူဝါဒများအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်တတ်သော နိုင်ငံရေးသမားများသည် လူထုအားလက်တွေ့ကျသော ရွေး ချယ်စရာများကို ပေးလေ့ရှိသည်။
နိုင်ငံရေးသမားများသည် သဘောထားချင်းတူသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ဦးတည်ချက် ပိုမိုတိကျသော နည်းလမ်းများဖြင့် စည်းရုံးမဲဆွယ်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပါတီဆောင်ပုဒ်ကို ဖန်တီးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း အရေးကြီးသည့် အချက်မှာ ၎င်းတို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ရရှိရန် အလားအလာ ပိုများလေ့ရှိသည်။
နိုင်ငံများစွာရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် မဲဆွယ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေပြု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံမှုကို အခြေပြုသည့် နည်းလမ်းများမှ ဖယ်ခွာ၍ မဲဆန္ဒရှင်များထံ အရောက်သွားကာ အစီအစဉ်များအပေါ် ပိုမို၍ အခြေပြုသော မဟာဗျူဟာများဆီသို့ ကူးပြောင်းရန် ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြသည်။
အောင်မြင်မှုရသော အစီအစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျဖော်ဆောင်သည့် ပါတီများသည် အခြားပါတီများတွင် မရှိသော မည်သည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ပြသကြသနည်း။ ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်မှုသည် ၎င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်မှု၊ တိုင်း ပြည်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာမှု သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှုတို့နှင့် မည်သို့ဆက်စပ်နေသနည်း။ နိုင်ငံ ရေးသမားများ၏ အပြုအမူအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေသော စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများက မည်သို့သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ အစီအစဉ်အတိုင်း စနစ်တကျဖော်ဆောင်နိုင်သောပါတီများသည် ပိုကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှုကို တောင်းဆိုနေသည့် နိုင်ငံသားများနှင့် အဘယ်ကြောင့် အတူတကွစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသနည်း။
ဤစာအုပ်သည် အလားအလာမကောင်းသော အခြေအနေမျိုးမှာပင် အစီအစဉ်အတိုင်း စနစ်တကျဖော်ဆောင် နိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပုံစံကို မည့်သည့်အရာများက တွန်းအားပေး၊ အားကောင်းစေသည်ကို လေ့လာခဲ့သော နိုင်ငံ ရေးသိပ္ပံပညာရှင် အဖွဲ့သုံးဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ စာရေးသူများသည် ဘရာဇီး၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဒိုမီနီကန် ရီပတ်ဘလစ်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ယူကရိန်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ တူရကီ၊ ဇမ်ဘီယာ စသော နိုင်ငံများမှ သင်ခန်းစာများကို ရယူကာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တာဝန်ယူမှုနှင့် နိုင်ငံသား - နိုင်ငံရေးသမား တို့အကြားအချိတ်အဆက်တို့အပေါ် ခေတ်အမှီဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး သုတေသနပြုချက်များကို အသုံးပြု လေ့ လာရေးသားထားသည်။
၁။ အစီအစဉ်အတိုင်း စနစ်တကျဖော်ဆောင်နိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ - စာအုပ်စာတမ်းများတွင် တွေ့ရှိရသော ရှုဒေါင့်များနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။
ဂျူအန်ပက်ဘလိုလူနာ၊ ဖာနန်ဒိုရိုဆင်ဘလတ်နှင့် ဆာဂျီယိုတိုရို
၂။ အစီအစဉ်အတိုင်း စနစ်တကျဖော်ဆောင်နိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပါတီစနစ်များ- အခွင့်အလမ်းများနှင့် အကန့်အသတ်များ။
၃။ အစီအစဉ်အတိုင်း စနစ်တကျဖော်ဆောင်နိုင်သည့် နိုင်ငံရေးကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသော ရှုဒေါင့်။
၄။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - အစီအစဉ်အတိုင်း စနစ်တကျဖော်ဆောင်နိုင် သည့် ပါတီများ၏ ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးသူများ၊ ပြဿနာအစပျိုးသူများ၊ lockers ၊ကိုယ်စားလှယ်များ။
ဂျော့ခ်ျဗယ်လာဒရက်စ် မိုလက်ဒါ၊ ခရစ်စတင်း ဆန်ပယ်လ်နှင့် ဆမ်ဗန်ဒါ စတပ်ခ်
Los programas sociales y la lucha contra la pobreza en la región Huancavelica. Balance y propuestas de acción para autoridades.
Image credit: Office of the Prime Minister - Ethiopia